နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခံယူသူများအတွက်၊ အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နှင့် ဖုံးလိုက်ခြင်း…. – Min Thayt
နိုင်ငံရေးသမားဟာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ် ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ရမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် အာဏာ ရှိလာပြီဆိုရင်၊ သူ့လုပ်ရပ်ဟာ သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ဘူး။ အများနဲ့ ဆိုင်လာ ပြီ။ အများကို သက်ရောက်လာနိုင်ပြီ။ ဒ့ါကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူအဖို့၊ သူ့လုပ်ရပ်တွေကို သာမန်လူတစ် ယောက်ထက် ပိုပြီး ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှု လုပ်နိုင်ရမယ်။ ဒါမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းသော အကျိုး ရလဒ်ကို ဖန်တီးထားနိုင်မယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့၊ နိုင်ငံရေးသမားဟာ အများ တကာရှေ့မှာ ထွက်ရပ်ရသူဖြစ်လို့၊ သူ့မှာ ရှိထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ သာမန်လူထက်တော့ ပိုရမယ်။ သာမန်လူထက်တော့ သာရမယ်။ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှု၊ နေထိုင်ကျင့်ကြံမှု၊ စိတ်နေထားရှိမှုတွေဟာ သာမန် လူထက် ပိုသာရမယ်။
လူတွေက ပြောကြလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ လူထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့မှာ သာမန် လူလိုမျိုး အပြုအမူတွေ ရှိနေတာ မဆန်းပါဘူးလို့ ပြောကြမယ်။ ဟုတ်ပါတယ် မဆန်းပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ လူထဲက လူဖြစ်ပါတယ်။ လူထုထဲက လူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါ တယ်။ လူထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟာ သာမန်လူလို အပြုအမူတွေ၊ အပြောအဆိုတွေ ရှိနေတာ မဆန်းပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ နတ်ဘုရားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော် ပြောနေတာက ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကို နတ်ဘုရားလို စွမ်းရည်မျိုးရှိဖို့ ပြောနေ တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူထက် အနည်းငယ်ပိုတဲ့၊ သာတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမျိုး ရှိဖို့ကိုပဲ ပြောတာဖြစ်ပါ တယ်။
ခေါင်းတစ်လုံးသာဖို့ လို / မလို
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှုမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ အပြောအဆိုသိမ်မွေ့ရာမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ ဉာဏ်အမြော်အမြင်မှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ ထကြွလုံ့လရှိမှုမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ လေ့လာစူးစမ်းမှုအရာမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
• နိုင်ငံရေးသမားဟာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိမှုမှာ သာမန်လူထက်သာရမယ်။
ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှု၊ အပြောအဆိုသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိမှု၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ ထကြွလုံ့လရှိမှု၊ လေ့လာစူးစမ်းမှုနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ် ယောက်မှာ မလိုအပ်ဘူးလား။ လူထုရှေ့ထွက်ရပ်တဲ့သူတစ်ယောက်မှာ မလိုအပ်ဘူးလား။
နိုင်ငံရေးကို ပရဟိတအကြီးစားလို့ ပြောတယ် မဟုတ်လား။ ပရဟိတလို့ ပြောလို့ ၊ ရေသောက် ဗိုက်မှောက်ပြီး အငတ်ခံပြီး အများအကျိုးလုပ်ရမယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ လူဖြစ်လို့၊ လူ့ လိုအပ်ချက် ရှိပါတယ်။ လူ့အဆင့်အတန်းဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လူချင်းတူတူ သူချင်းမျှမျှ နေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူနဲ့တူအောင် နေထိုင်မှုအဆင့် အတန်းရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံရေးသမားဟာ ပိုပြီး လုံ့လထုတ်ရတယ်။ ပိုပြီး ကြိုးကုတ်အား ထုတ်ရတယ်။ ပျင်းနေရင် နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ မရဘူး။ ဖျင်းနေရင် နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ မရဘူး။
ခေါင်းတစ်လုံး သာ / မသာ
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ အိမ်မှာနေ့စဉ် ရေချိုးပြီး မှန်ကြည့်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။
• ထကြွလုံ့လရှိမှုမှာ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသလား။
• လေ့လာအားထုတ်မှုမှာ သူများတကာထက် ခေါင်း တစ်လုံးသာသလား။
• စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုမှာ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသလား။
• သည်းခံနားလည်နိုင်မှုမှာ သူများတကာထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသလား။
• စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်မှုမှာ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသလား။
• အပြောအဆို လိမ္မာပါးနပ်မှုမှာ သူများတကာထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသလား။
မေးခွန်းတွေ အခါခါ၊ အထပ်ထပ် မေးနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အခုဟာကတော့ အဲသည်လို မဟုတ်နေပြန်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ လူရှေ့တော့ ထွက်ချင်တယ်။ လူလုံးတော့ ပြချင်တယ်။ လူရှေ့ထွက်ရင် လူတကာ အတုယူစံထားရလောက်တဲ့ အရည်အသွေးပျောက်နေတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားဟာ အခန်းထဲအောင်းပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ မရပါဘူး။ လူထုရှေ့ထွက်ရတယ်။ လူထုကြားထဲ တိုးဝင်ရ တယ်။ လူထုနဲ့ ဆက်ဆံရတယ်။ ပြောရတယ်။ ဟောရတယ်။ စည်းရုံးရတယ်။ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့လို့ နေလို့ မရဘူး။ လူ့ရှေ့ထွက်ရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရတာဖြစ်လို့ လူတွေက ကြည့်နေတယ်၊ လေ့လာနေတယ်။ လူတွေက သူ့ကို အကဲဖြတ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားဟာ မလုံမခြုံလည်းဖြစ်ရ တယ်။ ကသိကအောင့်လည်းဖြစ်ရတတ်တယ်။
နိုင်ငံရေးသမားဟာ လူထုအပေါ် လူပေါ်လူဇော်လုပ်နေလို့ချည်း မရဘူး။ လူထုကို ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်သေး သည် ဆိုအုံးတော့ ၊ လူထုဟာ သူ့ကို ကြည့်ပြီး အားကျစရာ၊ အတုယူစရာ ဖြစ်နေရမယ်။ သူဟာ အများတကာ အတွက် တိုင်းတာစရာ စံပေတံတစ်ခုဖြစ်နေရမယ်။ သာမန် လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားက ထားလိုက်အုံး။ လူထုရှေ့ ထွက်ရပ်ပြီး လူထုကို ဆွဲဆောင်ညှိ့ယူနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခံယူထားသူတွေတောင် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ပစ်စလက်ခတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သ,မနေဘူး။ သွေး,မနေဘူး။
လောက်လောက်လားလား အရည်အချင်း ဘာတစ်ကွက်မှ မရှိပေမယ့် လူထုရှေ့ရောက်ချင်နေတယ်။ လူလုံး ထွက်ပြချင်နေတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်နေတယ်။ လူထုရှေ့ဆောင်၊ အများရှေ့ဆောင်ဖြစ်ချင်နေတယ်။ ကဲ… မခက်ပေဘူးလား။
မြန်မာစကားပုံအရ ပြောရရင် ၊ ခါးတောင်း တစ်ခြား… ဟိုဟာတစ်ခြားဖြစ်နေတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း စာရေးသူဟာ အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးလိုက်တယ်လို့ မှတ်ယူစေလိုပါကြောင်း….
(ကျနော်ကတော့ သာမန် လယ်ယာတောင်သူအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူ၊ ကိုယ့်ဝမ်းစာကိုယ် ကျောင်းတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးချိနဲ့နေ တာ၊ သာမန်အောက် အရည်အချင်းနိမ့်နေတာ၊ မလေ့လာမစူးစမ်း မဆင်ခြင်ကြတာကို အပြစ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေမှာ အဲသည်လိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ သို့ပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်ချင်တယ်၊ အကျိုးပြုချင်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ လူတွေကိုတော့ သာမန်လူထက် အရည်အချင်းရော၊ အရည်အသွေးရော သာမန်ထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအလုပ်ဟာ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်၊ အများနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့အလုပ်၊ အများနဲ့စုပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်၊ လူထုအကျိုး အတွက် ၊ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခံယူချင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်နိုင်ငံရေး သမားတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာသင့်တယ်၊ သာရမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ရေးသားတင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။)
Tagged Political Animal, Politician, Politics, ႏိုင္ငံေရးသမား, ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ ႏွဳန္းစံ, ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ခ်က္
Previous post ဗမာ ၊ ဗမာ ဘုရင့် အာဏာ / သာသနာ
Next post မြန်မာလူ